Maxaad Ka Taqaana Wadaadka Argagixisada Ah Ee Diinta Buddhist-Ka: Warbixin – somalilandtoday.com
(SLT-Burma)Wuxuu masaajiddada ku tilmaamay inay yihiin “saldhigyada cadawga” isla markaasna Muslimiinta ugu yeeray inay yihiin “eeyo waalan”. wuxuu ku eedeeyay Muslimiinta inay xatooyo iyo kufsi u geystaan haweenka u dhashay dalka Burma.
Balse markii uu weeraray hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi, waxaa lagu riday xukun xadhiga ah, waxaana lagu eedeeyay geysashada falal daandaansi oo kasoo hoerjeedo sharciga dalkaas.
Balse waxay u muuqataa in xadhigiisa kaddib uu iska daayay hadalladii ka dhanka ahaa Muslimiinta.
“Ma yareysan kartid Maska si kasta ha u yaraado ee, Muslimiinta waxay la mid yihiin Maskaas,” ayuu yidhi Ashin Wirathu.
Wuxuu baraha bulshada ka bilaabay inuu ku faafiyo hadal ah in Islaamka uu la wareegay dalkaasi ayna tirada bulshada Muslimiinta ay sare u kacday
“Markii Facebook uu iga xidhay, waxaan ku tiirsnaan Youtube-ka balse dad badan kuma xirna, marka waxaan adeegsan Twitter si aan u sii wado howsha qarannimo ama qarameynta,” ayuu yidhi wadaadka.
Wareysi uu siiyay wargeyska Guardian, 2017-kii, waxaa uu ku yidhi . “Aung San Suu Kyi waxay dooneysay inay caawiso dadka shisheeyaha ah ee Bengali balse waan ka hor istaagay.”